စိတ်ထအောင်လို့ – Grab Love Story
မန္တလေးရဲ့ ဒီဇင်ဘာလကုန်ဆုံးဖို့ ရက်တွေ နီးကပ်လာပေမယ့် ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် အေးနေဆဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အာကာနိုင် တစ်ယောက် မအေးနိုင်ပါဘူး ချမ်းချမ်းစီးစီး သီချင်းတအေးအေးနဲ့ ရေထချိုးလိုက်ပြီး အသန့်ဆုံး ယောပုဆိုးနဲ့ စတစ်အဖြူရောင်လေးကို လဲလည်လိုက်ကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေမွှေးဆွတ်လိုက်တယ်။ ဆံပင်ကိုလည်း Code10 နဲ့ကော့နေ အောင် လိမ်းလိုက်ပြီး ချိုင်းနံ့ထွက်မှာ စိုးသဖြင့် နေဗီယာ လိမ်းလိုက်သေးပြီး အနွေးထည်ထူထူလေးကို ဝတ်လိုက်တယ်။ ” ခုံ နံပါတ်တွေ မဲနှိုက်ထားတဲ့အတိုင်း ကားပေါ်ကို တက်ပေးပါ နောက်ခုံကလူတွေ အရင်တက်ပေးပါနော် နေပြည်တော်မှာ အဝတ်အစား လဲဖို့အတွက်ပဲ အဝတ်အစားကို ယူထားပါ ကားပေါ်မှာအေးတဲ့အတွက် စောင်ယူခဲ့ပါ အနွေးထည် ဝတ်ခဲ့ပါ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်ထိုင်တဲ့ခုံမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်လို့ ရပါတယ်ဗျာ ခြေထောက်တင်ခြင်ရင်တော့ အဝတ်အစားအိတ်လေးပါ ကားပေါ်ယူလာလို့ ရပါတယ် “ ” ကဲ … ကဲ ကားတူးဗေါက်ထဲ ထည့်စရာရှိတာ ထည့်ပြီးရင် လူတွေကားပေါ် တက်ရအောင်ဗျာ “ လို့ ကားခုံနံပါတ်ရေးထားတဲ့ စာရွက်လေးကိုင်ပြီး ကျွန်တော်အော်လိုက်ရင်ပဲ ဘုရားဖူးသွားမယ့်လူ ငါးဆယ်လောက် ကားနားမှာ တိုးဝှေ့လာတယ်။
” အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မစိုး အပါဝင်ပေါ့ဗျာ မဲနှိုက်တာ နောက်ဆုံးရတဲ့အတွက် ခုံနံပါတ် 35 ကနေ 49 အထိ တက်လို့ရပါပြီဗျာ “ ” ဟုတ်ကဲ့ မစိုးအဖွဲ့တက်ပြီးရင် ကျွန်တော့်အဖွဲ့ပါ ခုံနံပါတ် 10 ကနေ 34 ထိ တက်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ ခုံနံပါတ်တွေကတော့ မဲနှိုက်ထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ပေးပါခင်ဗျာ “ ” ကျွန်တော့် အဖွဲ့ပြီးရင် မသိင်္ဂီအဖွဲ့ ကားပေါ်တက်ပေးပါဗျာ ခုံနံပါတ်5ကနေ9အထိပါဗျာ “ လို့အော်လိုက်တယ် မသိင်္ဂီအဖွဲ့ကားပေါ် တက်ပြီးသွားတော့ ကျန်နေတဲ့ ဗိုလ်စာချန်ထားတဲ့ ခုံလေးခုံမှာ ဦးလေးလင်မယားကို နှစ်ခုံထားပြီး ကျန်တဲ့နှစ်ခုံမှာ ကျွန်တော်တစ်ခုံ နဲ့ ကျွန်တော့်အမေကြီး တစ်ခုံထိုင်လိုက်တယ်။ ဟဲ … ဟဲ ဒါတော့ ကိုယ်တိုင်ကားငှားပြီး ကိုယ်တိုင်စီစဉ်တဲ့ ခရီးစဉ်ဆိုတော့ အခွင့်အရေးပေါ့ဗျာ။ ကားက မနက်လေးနာရီမှာ မန္တလေးကနေ စထွက်ခဲ့တယ်။ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဦးတိုက်ပြီးပေါ့။ နေပြည်တော်ကို မနက် ရှစ်နာရီမှာရောက်တယ်။ နေပြည်တော်မှာလည်း ဥပ္ပဒဿန္တိဘုရားကို အရင်ဝင်ဖူး ပြီးမှ ဗုဒ္ဓဂါယ ကိုသွား ဗုဒ္ဓဂါယ ကအပြန် ဆာဖာရီဥယျာဉ်ကိုဝင်ပြီး နောက်ဆုံး ရေပန်းဥယျာဉ် မှာအချိန်ဖြုန်း လည်ပတ်ကျ ရေချိုးကျလုပ်ပြီး ညရှစ်နာရီမှာ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို သွားဖို့အတွက် ကားဆရာကို ပြောလိုက်တယ်။ နေပြည်တော်ရေပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာ အဖွဲ့သားတွေနဲ့လည်ပတ်ကျ စားကြသာက်ကြပြီး ညရှစ်နာရီလောက်မှာ အဖွဲ့သားတွေကို ကားပေါ်တက်ခိုင်းခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ထိ သူ့ကိုကျွန်တော် သတိမထားမိသေးဘူး။ နေပြည်တော်ကနေ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို သွားဖို့ ကားထွက်မှ ဇာတ်လမ်းကစတာပဲ။ “ဦးအာကာ သမီးကားမူးလို့ နေရာလေး ခဏချိန်းပေးပါ့လား “ အသံလာတဲ့ဆီကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဆယ်နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးတစ်ယောက်က မျက်နှာလေးခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ လာပြောတယ်။
သူအတော်မူးနေတာနေမှာ ဒါမှမဟုတ် မနက်ကား စထွက်တော့ ဘုရားဖူးသွားမှာမို့လို့ အိပ်ရေးမဝတာလား အစာမစားခဲ့လို့များလား။ ” သမီးက တကယ်မူးနေတာလား သမီးခုံနံပါတ်က ဘယ်လောက်လည်း အမှုးပြေရင် ပြန်လဲပေးနော် သမီး “ ” ဟုတ် ဦး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သမီးခုံနံပါတ်က ဆယ်ရှစ် ပါ “ ကလေးမလေးပြောပြီးတာနဲ့ သူ့ကို ကိုယ်ထိုင်တဲ့ ထိုင်ခုံနေရာကို ထိုင်ခိုင်းပြီး ကိုယ်က သူ့ထိုင်ခုံဆီအသွား သူ့ထိုင်ခုံရဲ့ ကပ်လျှက်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ထိုင်နေတာတွေ့တော့ သေချာကြည့်မိတယ်။ အသက်က သုံးဆယ်ကျော်လောက် နဲ့ အရပ်ကတော့ထိုင်နေလို့ မမှန်းမိပေမယ့် အသားရေကခပ်လတ်လတ်နဲ့ ညိုတဲ့ဘက်ကို နည်းနည်းပါတယ်။ ရုပ်ရည်ကတော့ ချောတယ်ပြောရမယ်။ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်း နဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတာတော့အမှန်။ ” အစ်မ ထိုင်မယ်နော် “ ပြောလည်းပြော ထိုင်ခုံပေါ်ကို ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကပြောတော့ မော့ကြည့်တယ်။ ” အာကာလား ထိုင်လေ သမီးနဲ့ နေရာချိန်းပေးတာလား “ ” ဟုတ် “ ” အားနာစရာကွယ် အစ်မကပြောပါတယ် ကားမောင်းတဲ့အချိန် အိပ်နေ အမူးပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ “ ” ရပါတယ် အစ်မ ကိုယ့်ခရီးသည်ပဲ အစဉ်ပြေအောင် လုပ်ပေးရမှာပေါ့ “ ” ကျေးဇူးပါပဲ အာကာရယ် ဒီဘုရားဖူးခရီးကိုလည်း သမီးက လိုက်ချင်လွန်းလို့သာ လိုက်ခဲ့ရတာ အစ်မတို့က မန်းလေးမှာ အခြေမကျသေးဘူးလေ “ ” ဟင် … ဘာလို့လည်း အစ်မက မန်းလေးမှာနေတာ မဟုတ်ဘူးလား “ ” အင်း … အခုတော့ မန်းလေးသူ ဖြစ်နေပြီပေါ့ အရင်က ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေတာလေ။
ဟုတ် ထင်ပါတယ် အစ်မစကားသံကဝဲတော့ ဗမာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိတယ် အစ်မက ရှမ်းတိုင်းရင်းသူလား “ ” အစ်မကရှမ်းတိုင်းရင်းသူ မဟုတ်ဘူး တအောင်းလူမျိုး “ ” အစ်မ အမျိုးသားကရော “ ” အမျိုးသားက မရှိတော့ဘူး သေသွားပြီ သမီးသုံးနှစ်သမီးအရွယ်လောက်မှာ သူပုန်တွေက လူအင်အားအတွက် ရွာကိုလာပြီး ယောကျာင်္းလေးတွေကို စစ်တပ်လူအင်အား တောင့်အောင်ဆိုပြီး လူအင်အားခေါ်တဲ့အထဲမှာ သူပါသွားကတည်းက ရွာကို ပြန်မရောက်တော့ပဲ နောက်မှ သိရတာက တိုက်ပွဲမှာ ကျသွားတယ်လို့ သိရတာ “ ” အင်း စိတ်မကောင်းပါဘူး အစ်မ “ ” ရပါတယ် ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်သွားတာပဲ မန်းလေးကို ပြောင်းလာတယ်ဆိုတာကလည်း ရွာထဲကိုသူပုန်တွေလာပြီး မိန်းကလေးတွေဖမ်း မုဒိန်းကျင့်လက်ထပ်ယူတာခံကြရတယ် လက်ထပ်ဖို့ လက်မခံတဲ့သူတွေဆို သတ်ပစ်တာ မိန်းကလေးဆို ငယ်တာကြီးတာ မရွေးဘူး ချောတဲ့လှတဲ့သူ သူတို့သဘောကျတဲ့ သူဆို အတင်းအားဓမ္မ ဖမ်းတာပဲ “ ” ဟင် လူမဆန်လိုက်ကျတာဗျာ အဲ့တာကြောင့် မန်းလေးကို ပြေးလာတာပေါ့ ဟုတ်လားအစ်မ “ ” ဟုတ်တယ် မန်းလေးရောက်တာမှ သုံးလမပြည့်သေးဘူး သမီးက ဗီနိုင်းချိတ်ထားတဲ့ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ကိုမြင်ပြီး လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ မင်းအိမ်ကို စာရင်းလာပေးတာ “ ” အင်း အဲ့တုန်းက အိမ်မှာကျွန်တော်မရှိဘူး အမေက ပြောတယ်လေ လူသစ်နှစ်ယောက်တိုးတယ် ဆိုပြီး ဒါနဲ့ အစ်မနာမည်က “ ” ဝါဝါအောင် တဲ့ မဝါ လို့ခေါ်ပေါ့ “ ” ဟုတ် အစ်မ ကျွန်တော်မှတ်ထားပါ့မယ် စကားပြောရတာလည်းကောင်းတယ် အခုတော့အိပ်လိုက်အုံးမယ်ဗျာ အစ်မဖြစ်ရဲ့လား ကျွန်တော်က အိပ်ရေးနည်းနည်းကြမ်းတယ်နော် “ လို့ပြောပြီး စောင်ကို ခေါင်းမြှီးခြုံပြီး အိပ်လိုက်တယ်။
အိပ်မောကျလာတော့ ကျွန်တော် အိမ်မက်မက်နေတယ်။ အိမ်မက်ထဲမှာ ကျွန်တော်တစ်ဖက်သတ် ကြိုက်နေတဲ့ စော်လေးနဲ့ ရည်းစားတွေဖြစ်ပြီး သူ့အမေအလစ်မှာ ချိန်းတွေ့ရင်းနဲ့ သူရဲ့ နို့လေးတွေကိုကိုင်ပြီး ပေါင်တံလေးကိုပွတ် ဖီးလာတော့မှ သူ့ရဲ့ပင်တီလေးကို ချွတ်မယ်အလုပ် ကားမီးဖွင့်လိုက်တော့ အိပ်နေရာက လန့်နိုးလာတယ်။ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ လက်တစ်ဖက်က ကိုယ့်ဟာကိုကိုင်ပြီး ကျန်တဲ့တစ်ဖက်က ဘေးခုံမှာ အိပ်နေတဲ့ မဝါရဲ့ ပေါင်ပေါ်ရောက်နေတယ်။ တော်သေးတာပေါ့။ သူအိပ်နေလို့ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်လုံး စောင်ခြုံထားလို့ပေါ့ နို့မို့ဆိုမလွယ် လူတွေမြင်ကုန်မှာ။ ” ကဲ … ကဲ ဘုရားဖူးမိတ်ဆွေများခင်များ ကျန်းမာရေး သွားလို့ရအောင် ကားနားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ “ လို့ ပြောပြီး ကျွန်တော်ပါ ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်တယ်။ မဆင်းလို့မဖြစ် မျက်နှာပူလို့ ။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး အပေါ့သွားတော့ ရှေ့ပြေး လရည်ကြည်လေးတောင် ထွက်နေပေါ့။ ကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ ချွဲကျိကျိနဲ့ သေးပေါက်ပြီးတာနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ရင်း စိတ်ကို ချုပ်တည်းနေရတယ်။ သူရဲ့ပေါင်လေးက အိနေတာပဲ တွေးရင်းနဲ့ လီးကတောင်လာတယ်။ အိမ်မက်ထဲက အကြောင်းအရာကို လီးကတောင်တာလား လက်တွေ့ ပွတ်ခဲ့ရတဲ့ မဝါရဲ့ အထိတွေ့ကိုတောင်တာလားတော့ ဝေခွဲမရဘူး။ ဆေးလိပ်ကုန်တာနဲ့ ကားပေါ်တက်ပြီး မဝါရဲ့ သမီးထိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်နေရာဆီရောက်တော့ ကလေးမလေးက ကျွန်တော့်အမေကြီးရဲ့ ပေါင်ပေါ်ခေါင်းခုပြီး ကွေးကွေးလေးအိပ်နေတာနဲ့ မနှိုးတော့ပဲ။ သူ့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ သူ့အမေ မဝါရဲ့ဘေးပဲ ပြန်ထိုင်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော်ပြန်ထိုင်တော့ မဝါက မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပြီး.. ” မင်းပဲလား အာကာ သမီးကရော “ ” အိပ်နေလို့ မနိုးတော့တာ အစ်မ နိုးလိုက်ရင် ကလေးခေါင်းကိုက်မှာဆိုးလို့ပါ အစ်မက အပေါ့အပါး မသွားတော့ဘူးလား “ ” မသွားတော့ပါဘူး သမီးလေးကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးလို့ ကျေးဇူးပဲ ပြီးတော့ အာကာ ဒီတစ်ခါအိပ်ရင်တော့ သတိလေးထားပြီးအိပ် “ လို့ပြောပြီး ခေါင်းမြှီးလေးခြုံပြီး ကိုယ်ကို ဘေးတစ်စောင်းအနေထားနဲ့ တစ်ဘက်လှည့်ပြီး အိပ်သွားတာလား မှေးနေတာလား မသိတော့ပါဘူး။ ” လူစုံပြီလား ပြီးစီးကြပြီလား ကိုယ့်ဘေးမှာ ရှိတဲ့လူ ရောက်ပြီလားကြည့်ပေးဗျာ လူစုံရင် ကားထွက်မယ် “ ” လူစုံပြီဟေ့ ကားထွက်ဖို့လိုတော့တယ်ဟ အိပ်ချင်နေပြီ မီးမမှိတ်သေးလို့ဟ “ လို့ နောက်မှာထိုင်နေတဲ့ မစိုးက စနောက်ရင်းလှမ်းအော်တယ်။ သူပြောပေမယ့် ဂရုစိုက်မနေတော့ပဲ အိပ်ဖို့ပဲ ပြင်ဆင်လိုက်တော့တယ်။ စောင်ကို ခေါင်းမြှီးခြုံပြီး အိပ်ချင်ပေမယ့် မဝါနဲ့ ထိကပ်ပြီးထိုင်နေရတဲ့စိတ်က လူကို မရိုးမရွနဲ့ဖြစ်စေပြီး လူကအိပ်မပျော်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ မအိပ်ချင်ဆို အောက်ကလီးကလည်း တောင်ပြီလေ။ ဘယ်လိုစရင်ကောင်းပါ့မလဲဆိုပြီး တွေးရင်နဲ့ အချိန်တော်တော်ကြာတော့ အရဲစွန့်ပြီး ကျွန်တော့် စောင်ကိုသူ့အပေါ် မသိမသာလေး လှမ်းပြီးခြုံပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်းယောင်ပြီး ကျွန်တော်စောင်ကို ဆွဲပြီး ဘေးတစ်စောင်းလေး အိပ်နေရာကနေ ပက်လက်လေးပြန်အိပ်လိုက်တယ်။ သူအဲ့လိုအိပ်လိုက်တော့ ကိုယ့်အတွက် ဂွင်ဖြစ်လာတာနဲ့ ကျွန်တော့်စောင်ကြားက လက်ထုတ်ပြီး သူရဲ့စောင်ထဲနှိုက်လိုက်တယ်။
ပြီးမှ သူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်ကို လက်ကလေးတင်ပြီး ရရှိလာတဲ့ အချိန်အခါကို အကျိုးရှိရှိ အချိန်ဆိုင်းမနေတော့ပဲ မသိမသာလေး မဝါရဲ့ပေါင်တံတလျှောက် စုံချည် ဆန်ချည်ပွတ်သပ် ပေးနေမိတယ်။ တစ်ခါတော့ အပေါ်ကဖုံး ထားတဲ့ထမီခေါက်ကြားထဲကို လက်သွင်းပြီး ပေါင်တွင်းကြောလေးများကိုပါ ရွရွကလေး ပွတ်မိလိုက်တဲ့အခါ မဝါလည်း ဘယ်လိုမှ တင်းမခံနိုင်တော့ တလူးလူး တလွန့်လွန့် ထွန့်ထွန့်လူးကာနေပြီး သူ့ရဲ့ ကိုယ်လုံးက လှုပ်လာတော့ ကျွန်တော်လည်း လန့်ပြီး လက်ကို ရုတ်လိုက်တော့ မဝါက ကျွန်တော့်လက်ကို လှမ်းဖမ်းတာ ခံလိုက်ရတယ်။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်လေးကလည်း ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်လာပြီး.. ” ဘာလုပ်တာလည်း သူ့လက်ကလူကို စိတ်ထအောင်လို့ လုပ်တုန်းက လုပ်ပြီး ခုမှ ဘယ်ပြေးမလို့လည်း “ လို့ သူကတိုးတိုးလေး နားနားကပ်ပြီးပြောတော့ ကျွန်တော် အစတော့ကြောင်သွားတယ်။ ပြီးမှ ” မဟုတ်ပါဘူး အစ်မစိတ်ဆိုးမှာ ကြောက်လို့ပါ “ လို့ ကျွန်တော်ပါ သူ့ဘက်စောင်းရင်း ပြောလိုက်တယ်။ ” အစ ပထမက ဆိုးတယ် အိပ်နေတာများ လူကိုယောင်ပြီး သူ့မယားကျနေတာပဲ ဟိုပွတ် ဒီပွတ်လုပ် ပြီးတော့ မထိခလုတ် လာကိုင်သေး ဟင်း “ ” အခုရော ကိုင်ပေးရအုံးမလား “ ” မကိုင်နဲ့တော့လေ “ သူက စိတ်ဆိုးဟန်လေးနဲ့ ပြောတော့။ ” ဟီးးး ကျွန်တော်က ကိုင်ချင်နေတာဆိုရင်ရော “ ” ကိုင်လေ ဒါပေမယ့် မကို အထင်မသေးပါနဲ့နော် “ ” ဘာလို့လည်း “ ” သြော် ခုမှ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးတဲ့သူနဲ့ ခုလိုဖြစ်နေတာကို ပြောတာပါ “ ” မသေးပါဘူး မရယ် ကျွန်တော်လုပ်လို့ ဖြစ်တာပဲ ဒီကိစ္စတွေက လူတိုင်းမှ မလွန်ဆန်နိုင်တာ “ လို့ပြောပြီး လက်ကို သူ့စောင်ထဲပြန်ထည့်ပြီး မဝါရဲ့ပေါင်လေးကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ဝတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ထမိန်ကို ဖြေလိုက်ပြီးတော့ လက်ကို ထမိန်စအတွင်းထဲ အသာယာထည့်ပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ စောက်ပတ်တပြင်လုံးအား ခပ်ရွရွ ပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်ယင်း လက်ကို အပြင်ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး လက်ညိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို တံထွေးစွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ သူ့ထမိန်စထဲ ပြန်နှိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်တစ်ပြင်လုံးကို ထပ်ပွတ်ပေးပြီး မဝါရဲ့ စောက်စေ့လေးကို လက်ကစမ်းလိုက်တယ်။ တွေ့မှ စောက်စေ့လေးကို လက်ခလယ်ထိပ်နဲ့ အထက်အောက် ခပ်ကြာကြာလေး ပွတ်ပေးလိုက်တော့ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ထွက်လာတဲ့ မဝါရဲ့စောက်ရည် ပစ်ချွဲချွဲ တွေက ကျွန်တော့်လက်ဖဝါးတခုလုံး ရွှဲလာတော့။ ” အ .. အ .. အာ .. အာကာရယ် ဘယ် .. ဘယ်လိုတွေ လုပ်လိုက်တာလဲကွယ် ဟင့်ဟင့် ဟင့် “ သူ့ရဲ့ ပါးစပ်ကနေညည်းသံလေး သဲ့သဲ့ထွက်လာပြီး တကျွတ်ကျွတ်နဲ့ စုပ်တယ် ပြီးတော့ ခါးကလေး ကော့တွန့်တက်လာတယ်။ စောက်ရည်ရွဲပြီး ပေနေတဲ့ လက်ကို သူရဲ့ထမိန်အတွင်းနဲ့ သုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့စောက်ရည်တွေက ကျမြဲကျပြီး စောက်ခေါင်းထဲက ယားလာလို့နဲ့တူတယ်။ စောက်ဖုတ်က ပွစိပွစိနဲ့ ရှုံ့တွနေတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်ခလယ်ကို သူရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးပြီး လက်ညိုးက စောက်စေ့လေးကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လက်ကလေးနဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို စိုက်ထားကာ စောက်ဖုတ်နုတ်ခမ်းသားတွေကို ကလော်နိုက်ပြီး လက်ကို အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးလိုက်တော့ မဝါရဲ့စောက်ပတ်တပြင်လုံးက အစွမ်းကုန် ပြူးထွက်လာတယ်လို့ကို စိတ်ထဲမှာ ထင်နေမိတယ်။
ဒါနဲ့ လက်ခလယ်ကို သူ့ရဲ့စောက်ခေါင်းထဲ အဆုံးထည့်ပေးလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်လုပ်နဲ့ မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးလိုက်တော့၊ ” အင်း.. အင်း .. အင်း . “ မဝါရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာ မှေးလျက် ဒူးနှစ်လုံးမှာလည်း ကွေးညွှတ်နေပြီး စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုက ပွစိပွစိ ဖြစ်နေပြီး စောက်ခေါင်းအတွင်း နခမ်းသားတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးကို စုပ်ယူနေလိုက်တာများ ကားပေါ်မှာသာမဟုတ်ရင် ကျွန်တော်တက်ခွပြီး လိုးမိမှာအမှန်ပဲ။ မဝါလည်း ရာဂစိတ်တွေ ပိုမိုပြီး ပြင်းထန်လာလို့ ကျွန်တော့်လက်ညိုးကလေးကို သူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီး အတင်းဆောင့်ထိုးနေတယ်။ ပြီးတော့ ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်က သူ့နို့ကိုကိုင်ပြီး ညည်းနေလေရဲ့ ညည်းတာတောင်ကားပေါ်မှာမို့လို့ အသံကျယ်ကျယ်မညည်းရဲပဲ ခပ်တိုးတိုးလေး ညည်းရင်း၊ ” ကောင်းလိုက်တာ အာကာရယ် “ လို့ခေါင်းလေးကို ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်ပြောပြီး ကျွန်တော့် နုတ်ခမ်းကို လာပြီး သူ့နုတ်ခမ်းနဲ့ နမ်းပေးတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်းပြန်နမ်းရင်း ပြန်မေးလိုက်တယ်။ ” မ တအားကောင်းနေလို့နဲ့ တူတယ် မရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကနေ ကျွန်တော့်လက်ကို အတင်း စုတ်ယူနေတာ အဲ့ဒါ ဘာလဲ ဟင် “ ဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကနေ လက်ရဲ့ အရသာတွေ့လာပြီး လက်ထိပ်ဖျားကို ရစ်ပတ်ကာ တမျှင်မျှင်စုတ်နေတော့ လုပ်ပေးနေရတဲ့ ကျွန်တော်လည်း အရသာထူးကဲလာလို့ ကျွန်တော်သိလိုတဲ့ သူရဲ့စောက်ဖုတ်အကြောင်းကို မေးလိုက်တယ် ။ ” အဲဒါတော့ အစ်မလည်းမသိဘူး သူများတွေ ပြောကျတာတို့ စာအုပ်ထဲဖတ်ဖူးတာတော့ စောက်မျှော့ဆိုလားမသိဘူး အာကာရဲ့ “ ” အင်း ဒါဆို စောက်မျှော့ဆိုတာက အစ်မစောက်ဖုတ်ပဲ ဖြစ်ရမယ် လက်နဲ့တောင် လုပ်ပေးရတဲ့သူ ဒီလာက်ကောင်းတာ လီးနဲ့သာ လိုးလိုက်လို့ရတော့ တော်တော်ကောင်းမှာနော် အစ်မ “ ” ဟိုးဟိုး ဆရာ ကားပေါ်ကြီးမှာနော် တော်ကြာ နှစ်ယောက်လုံး အရှက်ကွဲနေပါအုံးမယ် “ ” ကျွန်တော်ကလည်း သဘောပြောတာပါ အစ်မရာ ကားပေါ်မှာတော့ တက်ပြီး မလုပ်ရဲပါဘူး ပြီးတော့ အစ်မကို ကျွန်တော်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးပြီးသွားပြီ ကျွန်တော့်လည်း ကောင်းအောင် လုပ်ပေးအုံးနော်။
” အစ်မက ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလည်း “ ” ခဏနေအုံ ကျွန်တော်အပေါ့သွားအုံးမယ် တော်ကြာ ကားပေါ်တင် ထွက်ကျကုန်လိမ့်မယ် “ ” အင်း အစ်မလည်း သေးပေါက်ချင်သေးတယ် ပြီးတော့ သန့်ရှင်းရေးလည်း လုပ်ချင်သေးတယ် “ ” ကားဆရာရေ ကျန်းမာရေးဗျို့ ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး “ လို့ကားဆရာကို အော်ပြောလိုက်တော့ ကားဆရာက လမ်းကျယ်တဲ့ နေရာမှာကားရပ်ပေးတော့… ” ကဲကဲ ဘုရားဖူး မိတ်ဆွေတို့ရေ ကျန်းမာရေးဗျို့ ကျန်းမာရေး “ လို့ ခရီးသည်တွေဘက်အော်ပြောပြီး မဝါနဲ့ နှစ်ယောက်အတူ ကားပေါ်ကနေဆင်းလာရင်း ရှေ့နားက မဝါသမီးအိပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ခုံကို ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးကနိုးနေတာနဲ့.. ” သမီး အောက်ဆင်းအုံးမှာလား ” လို့မဝါက မေးလိုက်တော့ ” ဟုတ် မေမေ သမီး သေးပေါက်ချင်နေတာ “ ဆိုတာနဲ့ မဝါက သူ့သမီးကိုခေါ်ပြီးကားပေါ်က အရင် ဆင်းသွားတယ် ပြီးမှ ကျွန်တော်က ” အမေကြီး အမေကြီးက အညောင်းပြေအညာပြေ အောက်မဆင်းတော့ဘူးလား “ ” ဆင်းမှာပေါ့ဟဲ့ ကလေးအိပ်ရေးပျက်မှာဆိုးလို့သာ ခြေထောက်က အတော်ညောင်းနေပြီ “ လို့အမေကြီးက မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း ရယ်ကျဲကျဲ လုပ်ပြီးသာ နေခဲ့ရတယ်။ ကားပေါ်ကနေ မြေးဖွား နှစ်ယောက်ဆင်းခဲ့ပြီး အမေကြီး အပေါ့သွားတာကို လိုက်စောင့်ပေးပြီး အမေကြီးပြီးသွားမှ အမေကြီးကို ကားပေါ်ပြန်ပို့ပြီးမှ ကျွန်တော်လည်း အပေါ့ပြန်သွားလိုက်တယ်။ အပေါ့သွားပြီးမှ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ထုတ်ပြီး သောက်နေရင်း ကားပေါ်မှာ မဝါနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ပြန်တွေးတော့ လီးကပြန်တောင်လာတယ်။
တော်သေးတာပေါ့ အောက်ကအတွင်းခံ ဘောင်းဘီ ပါလို့ပေါ့။ ဘောင်းဘီ ဆိုတာနဲ့ သတိရတော့မှ လူကွယ်ရာသွားပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ပစ်လိုက်ရင်း ပုဆိုးခပုံစထဲကို ထည့်လိုက်တယ်။ အဲ့တာမှ ကားပေါ်မှာ အဆင်ပြေမှာလေ နို့မို့ဆို ကားပေါ်မှာ ဘောင်းဘီချွတ်ရတာ တစ်ဒုက္ခဖြစ်နေအုံးမှာ။ ပြီးတော့ ခရီးသွားရင် ကားပေါ်ကို ပုဆိုးဝတ်ပဲတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အကျင့် ဘာလို့ဆို ကားနားရင် အပေါ့ပါးသွားရတာ လွယ်အောင်လို့ပေါ့။ အခုကျ ဒီနေရာမှာလည်း အဆင်ပြေသွားပြန်ရော ဟီးးးး။ ” တီ တီ တီ “ အတွေးစတွေကို ကားကြီးရဲ့ ဟွန်းသံက ဖျက်ပစ်တာ ခံလိုက်ရမှ တွေးနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး ကားပေါ်ပြန်တက်ခဲ့တယ်။ ကားပေါ်ရောက်တော့ အရင်ဆုံး ကိုယ်ထိုင်တဲ့ ခုံဆီ မျက်စိရောက်သွားတော့ ဟာ… သွားပါပြီ အားခဲထားသမျှ ကုန်ပါပြီ ဟုတ်တယ်လေ။ အမေကြီးဘေးမှာ မဝါရဲ့သမီးလေး မရှိတော့ဘူး နောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သားမိနှစ်ယောက် မုန့်တွေစားရင်း တီးတိုးတီးတိုးနဲ့ ရယ်မောပြီး စကားပြောနေလေရဲ့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ထိုင်ခုံမှာပဲ ကိုယ်ပြန်ထိုင်နေတုန်း။ ” ဦးအာကာ သမီးခေါင်းမူးမပြေသေဘူး နေရာပြန်ပေးပါအုံး ဦးလေးမလာသေးလို့ သမီးက အမေ့ဆီ မုန့်သွားစာတာ “ လို့ပြောတဲ့အသံကြားတော့မှ မှိုရတဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ ” သမီးက တကယ်ပဲ အမူးမပြေသေးဘူးလား ကဲလာလာ သမီး ဒီမှာပဲ ထိုင်နေတော့နော် “ လို့ပြောလိုက်ပြီး ကလေးနဲ့ နေရာချိန်းကာ မဝါဘေးက ကျွန်တော်ထိုင်မယ့် ခုံရှိတဲ့နေရာကို အောင်ပွဲရ စစ်သူကြီးပုံစံနဲ့ သွားထိုင်လိုက်တယ် ။ ထိုင်တယ်ဆိုယုံရှိသေး။
” ကိုယ်တော် အာကာ ကျွန်မတို့က သူများမစောင့်ရပဲ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ရှင့်ကို စောင့်ရတာ ပထမဆုံးအကြိမ် နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပါစေ ဘယ်နှယ့်တော် ဘာတွေတွေးပြီး ဘာတွေငေးနေလို့ ကားပေါ်လူစုံတာကို မသိရတာတုန်း မန်းလေးကျန်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တော်ကြိုက်နေတဲ့ ရည်းစားအကြောင်းများ စဉ်းစားနေလို့လား ဟမ် ကိုယ်တော် “ လို့မစိုးက လှမ်းပြောတယ်။ ” ဟာ မဟုတ်ပါဘူး မစိုးကလဲ ကျွန်တော် ! ကျွန်တော်က ကျိုက်ထီးရိုးကအပြန် ရန်ကုန်မှာ ဘုရားဖူးရင် ကားဘယ်နှစ်စီးငှားရမလဲ စဉ်းစားနေလို့ပါ အစ်မရာ (ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ ရန်ကုန်လိုင်းမဟုတ်သော အိပ်စပတ်ကားကြီးများ ဝင်ခွင့်မပြုပါ နယ်မှဘုရားဖူးလာသော ခရီးသည်များက လိုက်ဖ်ထွက် ကားငှား၍ လည်ရခြင်းဖြစ် [ စကားချပ် ] ) ” အမလေးဟယ် မင်းမလဲ ဒီတစ်နှစ်ပဲ ရန်ကုန်ကို ရောက်ဖူးတာလား ဘုရားဖူးလိုင်း ထောင်ထားတာဖြင့် လေးငါးနှစ်ရှိနေပြီ မင်းတို့လိုက်တာ ငါဆို ဒီနှစ်နဲ့ဆို သုံးနှစ်ရှိ ကိုအာကာရေ မင်းမဟုတ်မှ လွဲရော ပြတ်သွားတဲ့ မင်းရည်းစားအကြောင်းစဉ်းစားတာလား ဒါမှမဟုတ် မင်းကြိုက်နေတဲ့ သင်းသင်း အကြောင်း စဉ်းစားနေတာလား ဟမ် မင်းအကြောင်းကို ငါက အူမချေးခါး အကုန်သိတယ်နော် အာကာ “ ” ဟာ …… မစိုးကလဲ မဟုတ်ပါဘူးဆို ကဲ ကားဆရာရေ မီးလေးမှိတ်ပြီး ကားသာ မောင်းတော့ဗျို့ “ လို့အော်ပြီး စောင်ကို ခေါင်းမြှီးခြုံပြီး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်တယ်။
မလုပ်လို့မဖြစ် အဲ့ဒီ မစိုးက ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ ဘေးချင်းကပ်လျက်နေပြီး အိမ်နဲ့က နှစ်အိမ် တစ်အိမ်ဖြစ်နေတဲ့ ဆွေမျိုးတွေထက်ရင်းနှီးတဲ့ ကျွန်တော့်အကြောင်း အကုန်သိတဲ့သူ သူက ညောင်မြစ်တူးရင် ပုတ်သင်ဥပါ ပေါ်မှာဆိုးလို့ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်တာပါ ။ ကားထွက်ပြီး တော်တော်ကြာ ခရီးသည်တွေ အိပ်လောက်တဲ့ အချိန်ကျတော့ မဝါဆီက စကားကိုတိုးတိုးလေးနဲ့ ပြောလာခဲ့တယ်။ ” အာကာ အိပ်နေပြီလား “ ” မအိပ်ပါဘူး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာ “ ” အင်း အိပ်ချင်အိပ်တော့လေ အစ်မလည်း အိပ်တော့မယ် “ ” ဟာ မအိပ်ပါဘူး အစ်မက ကျွန်တော့်ကို ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရအုံးမှာ “ ” ဘာလုပ်ပေးရမှာလည်း “ ” အစ်မ မညစ်နဲ့နော် “ လို့ပြောလည်းပြော ကိုယ်ကို သူ့ဖက်လှည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လက်ကို စောင်အောက်က သူရဲ့ထမိန်ထဲကို နှိုက်ပြီး သူ့ရဲ့စောက်ဖုတ်ပြင်လေးကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးပြီး လက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး တံထွေးစွပ်လိုက်ပြီး ပြန်နှိုက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကို လက်ခလယ်ကိုထပ်သွင်းပြီး လက်ညိုးကလည်း သူ့ရဲ့စောက်စေ့ကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ လက်တစ်ဖက်က ပက်လက်လေးဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ပွတ်လိုက် ဗိုက်ကလေးကိုပွတ်လိုက် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့နို့ကို အင်္ကျီအပေါ်ကနေပဲ ကိုင်ပြီး ချေပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း မိန်းမတို့ရဲ့ ကာမခလုတ်ကို တတ်သမျှနဲ့ ဖွင့်ပေးနေမိတယ်။ ” အာ့ .. အာကာ ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာတုန်း ယားတယ် ဟဲ့ “ ” ဟင် … ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာ မကောင်းဘူးလား “ ” အောက်ကကောင်းတယ် အပေါ်က ယားတယ် အာကာရဲ့ “ လို့ပြောလည်းပြော သူ့ကိုယ်ပေါ်ကစောင်ကို ဖယ်လိုက်တယ်။
ကျန်တဲ့ ကျွန်တော့်စောင်တစ်ထည်ကို နှစ်ယောက်ခြုံပြီး ကျွန်တော့်ကို ခုံပေါ်ကျောမှီပြီး ပက်လက်အိပ်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်မောင်းပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကိုတင်ပြီး သူကမှေးနေတယ်။ သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော့်ဘက် ဆွဲလှည့်လိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်လုံးလေးကိုပါ ဘေးတစ်စောင်း ဆွဲလှည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘေးတစ်စောင်းလေးနေပြီး သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းလေးကို စတင်ပြီး နမ်းလိုက်တယ်။ အဲ့လို နုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းရင်း သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကပဲ သူက ကိုယ့်ကိုရှေ့ကနေပြီး ဦးဆောင်သွားတယ်။ နမ်းနေရင်းနဲ့ သူကခန္ဓာကိုယ်ကို အောက်ရှောလိုက်ပြီး သူ့ခေါင်းကို စောင်အောက်ဝင်ပြီး ကျွန်တော့် ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ နမ်းနေတာ ဆယ်မိနစ်လောက် ကြာမယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို ခုံပေါ်ပက်လက်ပြန်လှန်ခိုင်းပြီး သူက ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်မှာ အိပ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ လီးကိုကိုင်ကာ သူ့ရဲ့ပါးစပ်နဲ့ စတင်ငုံလိုက်တော့ အာငွေ့နွေးနွေးလေးက လီးကနေတဆင့် အကြောတွေကိုရောက်ရှိလာပြီး စိမ့်ကနဲ့နေအောင် ခံစားလိုက်ရတယ်ဒစ်ကလေးကို ငုံပြီး ဖွဖွလေးကိုက်လိုက်တော့၊ ” အင်း…အင်း..“ လို့တိုးတိုးလေးပဲ ညည်းနေမိတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ဒစ်ဖျားလေးကို ဆက်စုပ်ပေးတယ်။ ဒစ်ဖျားကို သူ့လျာလေးနဲ့ ရစ်ပြီး ဆွဲလိုက် လျက်လိုက်လုပ်လိုက် လီးတစ်ချောင်းလုံးကို အာခေါင်ထောက်အောင်ထိ ငုံပြီးစုပ်လိုက်ဆိုတော့။ ” အားးးရှီးးးး အင့် ကောင်းကာင်းလိုက်တာ မရယ် “ သူ့ရဲ့ပုလွေအစွမ်းကို ဆယ်မိနစ် လောက်ခံစားပြီးမှ ” အားးးးး … ရှီးးးးး မ မ ကျွန်တော် ပြီး ပြီးပြီ “ ဆိုပြီး ကျွန်တော့် လရည်တွေကို မဝါရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထုတ်မိသွားတယ်။
သူကလည်း ကျွန်တော့် လရည်တွေကို ထွေးမပစ်ပဲ မျိုချလိုက်တော့ အားနာသွားပြီး သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကို ဆွဲထူပြီး လက်မောင်းပေါ်ပြန်တင်လိုက်ရင်း ပါးလေးကို ခပ်ဖွဖွ နမ်းလိုက်ရင်း…. ” အားနာလိုက်တာ မရယ် “ ” သွား ခုမှအားနာနေတယ် အရည်တွေကလည်း အများကြီးပဲ “ ” ချစ်လို့ ထွက်သွားတဲ့ အရည်တွေပါ မရယ် “ လို့ ပြောပြီး လက်မောင်းပေါ်အုံးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကို ခပ်ဖွဖွလေး ကိုင်ပြီး ပြောလိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်တို့ကားက ကင်ပွန်းစခန်းကို မနက်သုံးနာရီကျော်မှာ ရောက်ပြီးတော့ ကားနားစခန်းမှာ ကားကိုနားပြီး ခရီးသည်တွေလည်း နားနေဆောင်ကိုသွားကျပြီး တောင်ပေါ်ယူမယ့် အဝတ်အစားတွေ နဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေယူပြီး ရေချိုးတဲ့သူက ချိုး အအေးဒဏ်မခံနိုင်တဲ့သူတွေ မျက်နှာသစ်ယုံပဲ သစ်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အပေါပါးသွားကြနဲ့ ကင်ပွန်းစခန်းရဲ့ကားနားတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြစ်နေကျအတိုင်း ဆူလို့ညံလို့ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ညက မဝါနဲ့ ဖြစ်ပျက်ထားတဲ့ အခြေနေကြောင့် ရေထပ်ချိုးလိုက်ပြီး ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက်ကားစီးရတာ လွယ်အောင်လို့ ဂျင်းဘောင်းဘီထုတ်ဝတ်လိုက်ပြီး ခြေအိပ်ပါ ဝတ်လိုက်သေးတယ်။ အပေါ်ကတော့ တီရှပ်အနက်လေးဝတ် အနွေးထည်ကို ထူထူထည်းထည်းလေးဝတ်ပြီး ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ ကိုယ်တွေက မြေးဖွားနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ စောင်နှစ်ထည်နဲ့ ကြက်သားကြော်ထည့်ထားတဲ့ လက်ဆွဲဂျိုင့်တစ်လုံးပဲ ဆွဲခဲ့ပြီး မလိုအပ်တာတွေကို ကားပေါ်တင်သင့်တာတင် တူးပေါက်ထဲ ထည့်စရာတာထည့်ပြီး… ” ကဲ … ကဲ ဘုရားဖူးခရီးသည်များခင်များ တောင်ပေါ်ကို မလိုအပ်တာတွေ မယူခဲ့ပါနဲ့ စောင်တစ်ထည်နဲ့ စားစရာပါရင် ရပါပြီ တောင်တက်ကားပေါ်မှ ပစ္စည်းတွေမေ့ကျန်ခဲ့ရင် ပြန်မရနိုင်ပါဘူး “ လို့အော်ပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ သားမိနှစ်ယောက်တည်း သီးသန့်ထိုင်နေတဲ့ မဝါတို့ သားမိဆီကို သွားလိုက်ပြီး… ” အစ်မ တောင်ပေါ်ယူဖို့ စီစဉ်ပြီးပြီလား “ ” အင်း ပြီးပြီ အာကာ တောင်တက်ကားပေါ်ရော ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်မှာရော အစ်မတို့ သားမိကို ပစ်မထားပါနဲ့နော် တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးလို့ “ ” ဟာ ပစ်မထားပါဘူး ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ခရီးသည်တွေကို ပစ်ထားပါ့မလား အစ်မကိုဆို ပိုတောင်ပစ်မထားသေး “ လို့ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ် ကားတက်စခန်းရောက်တော့ ကျွန်တော် နဲ့ မဝါ ပစ္စည်းတွေကို စုပုံထားလိုက်တယ်။ ပစ္စည်းတွေကို မဝါ စောင့်ခိုင်းလိုက်ပြီး ခရီးသည်တွေထဲက ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်ဖူးနေကျ ခပ်သွပ်သွပ် ယောကျာင်္းသား ခြောက်ဦးနဲ့ ကျွန်တော်အပါဝင် ခုနှစ်ယောက်က တောင်ပေါ်တက်ဖို့ ကားထိုးတာနဲ့ အရင်နေရာတက်ထိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ ကျွန်တော့်အဖွဲ့က မိန်းမသား နဲ့ အသက်ကြီးကြီး ခရီးသည်တွေကို ကျွန်တော်တို့နေရာထိုင်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော်တို့က ပြန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်။ ပျော်တော့ ပျော်စရာကြီးရယ်။ ဒီလိုနဲ့ အတက်ဆင်း သုံးခေါက်လောက် လုပ်လိုက်တာ ကျွန်တော့်အဖွဲ့စုံတာနဲ့ အနွေးထည်ထဲက ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီး မစိုး နဲ့ မသိင်္ဂီင်္ဆီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ ” တွီ … တွီ … ဟယ်လို မစိုးလား တောင်ပေါ်ရောက်ရင် ကျွန်တော်တို့ နားနေကျ နေရာမှာပဲ နေရာမှာ နေရာဦးထားလိုက်အုံးနော် မစိုး “ ” အေးပါဟယ် နင်အရင်ရောက်ရင်လည်း ဖုန်းလှမ်းဆက်အုံး ဖွန်ပဲကြောင်မနေနဲ့ကြားလား “ ” ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒါပဲနော် ကျွန်တော် မသိင်္ဂီဆီလည်း လှမ်းဆက်လိုက်အုံးမယ် “ ဆိုပြီးဖုန်းချလိုက်တယ်။ ပြီးမှ မသိင်္ဂီဆီလှမ်းဆက်ပြီး အကျိုးကြောင်းပြောပြကာ ကျွန်တော်တို့မြေးဖွား နှစ်ယောက်နဲ့ မဝါသားမိ ကားပေါ်တက်ဖို့ စီစဉ်လိုက်တော့တယ် ။
အမေကြီးနဲ့ မဝါသမီးလေးကို ခေါင်းခန်းထဲ လိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီး ကျွန်တော်နဲ့ မဝါက ကားနောက်မှာပဲ နေရာယူလိုက်ကျတယ်။ ကားထွက်လို့ ကျိုက်ထီးရိုး တောင်တက်လမ်းပေါ်ရောက်တော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ တောင်ပေါ်တက်ပြီဆိုတော့မှ လေကလည်းတိုက် ကားကလည်း ဘယ်ညာလှုးနဲ့ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဘေးမှာထိုင်တဲ့ မဝါက ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေပြီ။ မဝါကလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ သူ့ရဲ့ခေါင်းက ကျွန်တော့်ရင်ဘက်နား ကပ်ပြီး လက်နှစ်ဖက်လုံးကလည်း ဖက်ထားတာများ တစ်ခါတလေ အသက်ရှုတောင်ကျပ်တယ်။ တွေးကြည့်ရင် ညားခါစလင်မယား ဘုရားဖူးထွက်တဲ့ ပုံစံမျိုး ။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ရင်ပြင်တော်ပေါ် ရောက်ဖို့ တောင်သုံးဆယ့်သုံးလုံးကို တောင်တက်ကားနဲ့ တစ်နာရီကျော်လောက် တက်ခဲ့ရပြီး တောင်တက်ကားနားစခန်းကနေ ရင်ပြင်တော်ပေါ်ကို ဆယ်မိနစ်လောက် ခြေလျင်ထပ်ပြီး တက်ရတယ်။ ရင်ပြင်တော်ပေါ်ရောက်တော့လည်း မောပမ်းသမျှတွေက ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်မြတ်ကြီးကို ဖူးတွေ့ရတော့ အမောတွေက ပြေပျောက်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့က နှစ်တိုင်းမှာ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီမြတ်ကြီးကို ဖူးပြီး ရင်ပြင်တော်ပေါ် မှာပဲ အိပ်စက်ကျတယ်။ အိပ်ဖို့အတွက်က ဖျာငှားတဲ့အဖွဲ့ ရှိသလို လိုအပ်ရင် စောင်နဲ့ ခေါင်းအုံးပါ ငှားလို့ရပါသေးတယ်။ ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ တည်းခိုခန်းတွေလည်းပြီး စားသောက်ဆိုင်တွေ ထမင်းဆိုင်တွေနဲ့ ကြက်ပျံမကျစည်ကားလှပါပေတယ်။ ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ အိပ်စက်လို့ ချမ်းအေးပါတယ် ဆို ဒီဇင်ဘာလ မှာတောင် စောင်ကို ခေါင်းမြှီးခြုံလိုက်ရင် အအေးဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတော့ပါဘူး။
နှင်းလည်း မကျဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့ဘုရားဖူးအဖွဲ့က ကျိုက်ထီးရိုး ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ ဘုရားဖူး ကျီးပါးစပ်တို့ မုဆိုးတောင်တို့ကို လိုက်ပို့ပြီး တစ်ချို့ လူငယ်တွေကတော့ ရေတံခွန်တောင်ကို သွားတဲ့သူသွား ကျောက်ထပ်ကြီးဘုရားကို သွားတဲ့သူသွားနဲ့ လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ တစ်ညတာအိပ်စက်ခဲ့ကြပြီး မနက်မိုးလင်းလင်းချင်း တောင်ပေါ်ကနေ ပထဆုံးပြန်ဆင်းတဲ့ ကားတွေနဲ့ပဲ တောင်အောက်ကို ပြန်ဆင်းခဲ့ကြတယ် ။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ တောင်ပေါ်ကဆင်းပြီး ကင်ပွန်းစခန်းရောက်တော့ ကားနားတဲ့နေရာဆီသွားကြပြီး အဝတ်စားလဲ စားကြသောက်ကြနဲ့ ပျော်ရွင်စရာ ဘုရားဖူးခရီးပါပဲ။ ရင်ပြင်တော်မှာတုန်းက မဝါနဲ့အတူ ကျီးပါးစပ်ကိုသွား ပြီးတော့ မုဆိုးတောင်သွားကြပြီး စားလိုက်သောက်လိုက် နဲ့ ပျော်စရာအတိဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ် ။ ကင်းပွန်းစခန်းက ထွက်ပြီး ကျိုက်ထိုမြို့ရဲ့ အထင်ကရ ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ ကျိုက်ပေါလောမှဲ့ရှင်တော်နဲ့ မဟာမုနိဘုရားတို့ကို ဝင်ရောက်ဖူးမျှော်ပြီး ပဲခူးကိုဘက်ကို ခရီးဆက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ ပဲခူးမရောက်ခင် ဝေါမြို့မှာ ငါးခြောက်ဝင်ဝယ်ခဲ့ပြီး ထန်းရည်လေးပါ သောက်ခဲ့သေးတာပေါ့။ ကားပေါ်မှာတော့ အမေကြီးက မဝါရဲ့သမီးလေးကို သူ့အနားပဲ ခေါ်ထားပြီး အတူထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ မဝါက တစ်တွဲပေါ့။ ကားပေါ်မှာ နေ့ခင်းဘက်ဆိုတော့ ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် မဝါနဲ့ကျွန်တော် လူလစ်ရင် လစ်သလို ခိုးနမ်းခဲ့ရတာလည်း အမောပါပဲ။ ပဲခူးရွှေမော်ဓေါဘုရားကို မနက်ကိုးနာရီလောက်မှာ ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီကတစ်ဆင့် ရွှေသာလျောင်းကို ထပ်ဖူးခဲ့ပြီး ရန်ကုန်သို့ ဘုရားဖူးရန် ပဲခူးကနေ ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ ကားကြီးကွင်းထဲ ကားနားပြီး လိုက်ဖ်ထွက် နှစ်စီးကို တစ်ဆင့်ငှားကာ ရန်ကုန်မြို့တွင်းကို ဘုရားဖူးထွက်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ဘုရားစုံဖူးပြီးတော့ ညကိုးနာရီလောက်မှာ ချောင်းသာကို သွားဖို့အတွက် ကားကြီးကွင်းထဲမှာ ပြင်ကြဆင်ကြ စားကြသောက်ကြ စကြနောက်ကျနဲ့ ပျော်ရွင်စရာ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ် ။
ဒီလိုနဲ့ ချောင်းသာကို သွားကြတယ်။ ရန်ကုန်က ထွက်တော့ ညဆိုပေမယ့် ခရီးသည်တွေက အိပ်တဲ့သူအိပ် တီဗွီကြည့်တဲ့သူကြည့် နဲ့ ကားပေါ်မှာ တစ်ညတာကိုကုန်ဆုံးဖို့အတွက် တာဆူလိုက်ကြတယ် ။ ပုသိမ်လမ်ပေါ်ရောက်တော့ ည ဆယ့်နှစ်နာရီကျော်လာတာနဲ့ အများစုအိပ်ကုန်တာနဲ့ မဝါနဲ့ကျွန်တော်လည်း ကားပေါ်မှာပဲ ကျွန်တော်က သူ့စောက်ဖုတ်ကို နှိုက်ပေးလိုက် သူက ကျွန်တော့လီးကို စုတ်ပေးလိုက်နဲ့ လုပ်ရင်း မနက်သုံးနာရီလောက်မှာ ချောင်းသားကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ ချောင်းသာရောက်တော့ ကြိုတင်ပြီး ဘိုကင်လုပ်ထားတဲ့ တည်းခိုခန်းမှာပဲ ကားထိုးလိုက်ပြီး သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ကိုယ့်အခန်းကို ဝင်ပြီး ပစ္စည်းတွေချလိုက် စကားပြောလိုက်နဲ့ အိပ်ဖြစ်တယ်ကို မရှိကျဘူး ။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်အတွက် အခန်းက free ပေးတာဆိုတော့ ကျွန်တော့်အခန်းထဲကို မဝါသားအမိပါ ထည့်လိုက်တယ်။ တည်းခိုခန်းက တစ်ခန်းကို လေးယောက် နေရတာဆိုတော့ ကွက်တိပဲပေါ့။ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ပစ္စည်းတွေချပြီး မဝါသားအမိကို တစ်ကုတင်ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အမေကြီးက တစ်ကုတင်ပေါ့။ ကျွန်တော်လည်းပစ္စည်းတွေချပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေရဲ့ အခန်းတွေကို လိုက်ကြည့်ရသေးတယ်။ ပြီးတော့ အခန်းခလိုက်တောင်း တည်းခိုခန်း ကောင်တာကိုသွား ငွေရှင်းပြီး ကျွန်တော်လည်း မှေးချင်တာနဲ့ အခန်းထဲပြန်ဝင်လာပြီး အိပ်လိုက်တယ်။ အိပ်တော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း တစ်ကုတင်ဖြစ်နေပါပြီ။ အမေကြီးက ကျွန်တော့်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ရအောင်လို့ဆိုပြီး မဝါသားအမိနဲ့ သွားအိပ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း မအိပ်ခင် မဝါကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ သူကလည်း ပြန်အကြည့် နဲ့ အကြည့်ချင်းဆုံတော့ မဝါရှက်ပြုံးလေး ပြုံးပြီးပြန်ရီပြတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ပြန်ရီပြလိုက်ပြီး ညက မအိပ်ရသေးတာနဲ့ မဟန်နိုင်တော့ပဲ အိပ်ပစ်လိုက်တယ် ။ နားထဲမှာ ပူညံပူညံ အသံတွေကြားတာနဲ့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အမေကြီးရယ် မဝါသားအမိရယ်က ကမ်းခြေကိုဆင်းဖို့ ပြင်ဆင်ပြီးနေကျပြီ။ ” အယ် အမေကြီးတို့ ကမ်းခြေဆင်းတော့မှာလား “ ” အေး ငါ့မြေး သားတောင်နိုးတော့မလို့ “ ” အာ့ဆို ခဏစောင့်အုံး သားမျက်နှာသစ် အဝတ်စား လဲလိုက်အုံးမယ် “ ” အေး အေး အပြင်ဘက်စောင့်နေမယ် မြန်မြန်လုပ်ခဲ့နော် “ ” ဟုတ်ကဲ့ အမေကြီး “ လို့ပြောပြီး မဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဂျင်းဘောင်ဘီ ဒူးဖုံးလေးဝတ်ပြီး အပေါ်အင်္ကျီက နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အဝါရောင်တီရှပ်လေး ဝတ်ထားတယ်။ စိုပြေပြီး အညိုဘက် နည်းနည်းသန်းတဲ့ မဝါရဲ့ အသားအရေနဲ့တော့ အလွန်လိုက်ဖက်ပြီး ကြည့်ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ မဝါရဲ့ မိန်းမပီသလွန်းတဲ့ စွဲမက်စရာ အလှများကိုလည်း ဖုံးကွယ်ထားနိုင်စွမ်းတော့ မရှိပါဘူး။ မဝါရဲ့ အဖုအထစ် အမို့အမောက် အရှိုက်အဟိုက် အစွင့်အကားတို့က အဝတ်အစားတွေကို ထွင်းဖေါက်ပြီး ထင်းထင်းကြီး ပေါ်လွင်နေပါသေးတယ်။ သွေးသားဆူဖြိုးပြီး အလှတွေတိုးနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်စိတ်တွေကလည်း ဗလောင်ဆူပြီး လှုပ်ခတ်လာပါပြီ။
အင်းလေ မဝါကို ခုမှ သေသေချာချာကြည့်မိတာ အသက်က 34 နှစ်သာဆိုတာ မထင်ရဘူး။ မသိတဲ့သူဆို 27 28 လောက်ပဲ ထင်ကြမှာ။ အရပ်က5ပေလောက်ဘဲရှိမယ်။ အိမ်ထောင်ကျဖူးပေမယ့် တောင့်တင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ မသေးမကြီးတဲ့ နို့တွေရယ် သိပ်မကြီးပေမယ့် ဂျင်းဘောင်းဘီ ဝတ်ထားလို့ တောင့်တင်းတဲ့ ဖင်လေးကိုပါ မြင်လိုက်ရတော့ သူ့ပုံလေးကို သေချာကြည့်ပြီး မကြာခင်မှာ လိုးရတော့မှာပါလား ဆိုတဲ့ အသိကြောင့်လီးကတောင်လာတယ် ။ မျက်နှာသစ် အဝတ်စားလဲပြီး ကမ်းခြေကို အတူတူဆင်းခဲ့ကြပြီး ကမ်းခြေရောက်တော့ အမေကြီးက ဖျာတစ်ချပ်ငှားလိုက်ပြီး ပင်လယ်စာ မှာထားကာ ကျွန်တော်ရယ် မဝါရယ် မဝါသမီးရယ်က ရေဆင်းချိုးကြတယ်။ ဘောကွင်းနှစ်ကွင်းပါငှားခဲ့တယ်။ မဝါတစ်ကွင်း သူ့သမီးလေးတစ်ကွင်းပေါ့ သူတို့စီးတဲ့ ဘောကွင်းကို လိုက်ထိန်းပေးပြီး ကျွန်တော်ပါ ရေထဲဆင်းဆော့ဖြစ်တယ်။ ရေချိုးတာ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့… ” ဟေ့ ငါ့မြေးအာကာ ငါ့မြေးမလေး စိမ့်စိမ့်ကို တင်ပေးတော့ ရေချိုးကြာရင် ကလေးအအေးပတ်လိမ့်မယ် “ ဆိုပြီး အမေကြီးက လှမ်းအော်တာနဲ့ ကမ်းစပ်ပေါ် သုံးယောက်သားတက်ခဲ့ပြီး အမေကြီးမှာထားတဲ့ ပင်လယ်စာတွေစား လာရောင်းတဲ့ ငါးကင်တွေ ဝယ်စားပြီး အတူတူစားနေတုန်း ” အာကာ အမေကြီးနဲ့ ကလေးပြန်တော့မယ် သမီးမဝါ ကရော ပြန်လိုက်တော့မှာလား “ ” မလိုက်သေးဘူး အမေကြီး “ ” အေး မလိုက်သေးလည်း နေခဲ့ အာကာ ငါ့မြေး မင်းအစ်မကို ဂရုစိုက်လိုက်အုံး ငါနဲ့ ငါ့မြေးမလေးကတော့ ကျောက်မောင်နှမသွားမယ် ပြီးတော့ ဖိုးကုလားကျွန်းနဲ့ သဲဖြူကျွန်းပါ သွားအုံးမှာ ကလေးကမရောက်ဖူးသေးလို့ “ ” ဟင် အမေကြီးတို့က ကြာမှာလား “ ” အေး ထမင်းစားမစောင့်နဲ့ ဝယ်စားခဲမှာ ကြားလား မင်းသာ မင်းအစ်မကို ဂရုစိုက်လိုက် သူသွားချင်တဲ့နေရာ လိုက်ပို့လိုက် ကြားလား “ ” ဟုတ် အမေကြီး နဲ့ သမီးသွားရင် သားကတော့ လိပ်ဥတူးမှာ အမေကြီး “ ” အယ် ဒီကလေးနဲ့တော့ ငရဲတွေကြီးကုန်တော့မှာပဲ ဘယ့်နှယ့် သူများအသက်ကို “ ” ဟီးးး အမေကြီးကလည်း သားက ဘုရားလည်းဖူး ကမ်းခြေရောက်တုန်း လိပ်ဥပါ တူးမလို့ပါ “ ဆိုပြီး မဝါလက်ကိုဆွဲကာ အမေကြီးနားက အမြန်ပြေးထွက်ပြီး ရေဆင်းချိုးခဲ့တယ်။
အမေကြီးနဲ့ မဝါသမီးပြန်သွားတော့မှ.. ” မ ဘောစီးမလား “ ” ဟင် ကောင်စုတ်လေး ဘာတွေ လာပြောနေတာလည်း “ ” မကလည်း ဘောကွင်းပေါ်ထိုင်ပြီး စီးမလားလို့ မေးတာပါ ဖြစ်ချင်တာတွေ တွေးနေတယ် “ ” ဟွန်း လူကိုများ သူ့မယားကျနေတာပဲ “ မဝါကို ဘောကွင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီး ရေနက်ထဲကို ဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ်။ ရေနက်ထဲရောက်မှ ခြေထောင်နဲ့ အောက်နဲ့ မထိသလိုလုပ်ပြီး သူထိုင်နေတဲ့ ဘောကွင်းကို ခိုလိုက်တယ်။ တကယ်တမ်း ရေက ရင်ခေါင်းလောက်ရှိတာပါ။ သူက ဘောကွင်းပေါ်ကို ပက်လက်အိပ်တဲ့ပုံစံလေးစီးတာဆိုတော့ အောက်ကနေ ဘောကွင်းခိုပြီး သူ့ဖင်ကို ညှောင့်သလိုလေးလုပ်နေမိတယ်။ သူကလည်း သာယာလို့ပါပဲ။ ရေထဲ နာရီဝက်လောက်စိမ်ပြီး ကမ်းပေါ်ကိုပြန်တက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ တည်းခိုခန်းကို ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ တည်းခိုခန်း ရောက်တော့ အခန်းထဲမှာ သူက ရေအရင်ထပ်ချိုးပြီး ကျွန်တော်ကသူပြီးမှ ထပ်ချိုးလိုက်တယ်။ ရေချိုးပြီး ရေလဲပုဆိုးလေးဝတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲကထွက်တော့ သူက အဝတ်စားတောင်လဲပြီးနေပေါ့။ ကျွန်တော် အခန်းထဲရောက်ရောက်ချင်းပဲ သူ့ရဲ့ နုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲစုပ်ယူနမ်းပစ်လိုက်တယ်။ သူ့ဖက်ကလည်း တုံ့ပြန်အနမ်းတွေနဲ့ ပြန်လာပြီး နမ်းတယ်။ သူနမ်းပုံလေးက သူ့ရဲ့လျှာဖျားလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ပါးစပ်အတွင်းထဲ ထိုးလိုက် ပြီးရင် ပြန်ထုတ်သွားလိုက်နဲ့ သူ့ရဲ့လျှာကို အမိဖမ်းမရဘူး။ ဖမ်းမရလေ ဖီးကတက်လေ လိုးချင်လာလေ နုတ်ခမ်းချင်း နမ်းနေရင်းနဲ့ပဲ သူ့ကိုမွေ့ယာပေါ် အသာယာလှဲချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အနမ်းမပျက်ခဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်တယ်။ အပေါ်ပိုင်းမှာ လက်ကျန် ဘော်လီတစ်ထည်ပဲ ရှိတော့တယ်။ လက်ကျန်လေးလည်း ထပ်ချွတ်လိုက်တယ်။
နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေရာက တဖြည်းဖြည်း လျှောဆင်းလာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ရင်သား မို့မို့လေး နှစ်ဖက်ဆီကို ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ နို့အုံ့နှစ်မြွှာကိုလည်း လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖွဖွလေးဖျစ်နယ်ပေးလိုက်တယ်။ နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ခုကို တစ်လှည့်စီ လက်နှင့်ပွတ်လှိမ့် ဖျစ်ချေလိုက် သွားလေးနဲ့ ခပ်ဖွဖွ ကိုက်ခဲပြီး စုပ်ငုံလိုက် နို့သီးဖျားနှစ်ခုကို စို့လိုက်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ” အို အို အာကာရယ် ဘယ်လို ဘယ်လိုတွေ လုပ်လိုက်တာလဲကွယ် ဟင့်ဟင့် ဟင့် “ သူ့ရဲ့ ပါးစပ်ကနေညည်းသံလေး သဲ့သဲ့ထွက်လာပြီး တကျွတ်ကျွတ်နဲ့ စုပ်တယ်။ ပြီးတော့ ခါးကလေး ကော့တွန့်တက်လာတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အငြိမ်မနေပါဘူး။ သူ့ရဲ့လုံချည်လေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပုဆိုးက ချွတ်ပြီးနေပြီ။ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကလည်း အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပါးပါးလေးတထည်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ သူ့ရဲ့ ဖင်သားဆိုင်လေး ကားကားအိအိနှစ်ဖက်ကို ကျွန်တော် ဖျစ်လိုက် ညှစ်လိုက်လုပ်ပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ သူကလည်း ဖင်ကိုအသာအယာကြွပေးတယ်။ အောက်ခံဘောင်းဘီ ကျွတ်သွားတော့မှ ဖင်သားနှစ်ဖက် အကြား အထက်နားလေးက သူ့စောက်ခေါင်း အတွင်းထဲထိ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကို တံထွေးအနည်းငယ် စွပ်ပြီး သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်ပြီး ထိုးဆွကစားပေးလိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ ဆီးခုံမို့မို့အောက်က စောက်ပတ်ပြင် ဖောင်းဖောင်းအိအိကလေးကိုလည်း လက်တစ်ဖက်က ပွတ်သပ်ပြီး နူးပေး ဆော့ပေး နေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ပေါင်သား ဖွေးဖွေးနှစ်ဖက်ကို ဘယ်တစ်ဖက် ညာတစ်ဖက် ထောင်ကားပေးလိုက်တော့ ပေါင်ခွဆုံနေရာက သူ့ရဲ့စောက်ပတ် ဖောင်းဖောင်းလေးကို ပါးစပ်နဲ့ဖိကပ်ပြီး အငမ်းမရပဲ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ဆွဲပြီး လျှာနဲ့ပျွတ်ကနဲ မြည်အောင် အောက်ကနေပြီး အပေါ်ကိုယက်သပ်တင်ပစ်လိုက်တယ်။
” အမယ်လေ့ လေး မောင်ရယ် … အ ရှီး အ အလာ့ … လုပ် လုပ်ရက်လိုက်တာ ဘယ်လိုတွေများ လုပ်နေတာလဲကွာ အင့် ဟင့် …အား အိ အီး အီး “ သူညည်းလည်းညည်း ကော့တက်သွားပြီး ကျွန်တော့် ခေါင်းကဆံပင်တွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ယောင်ယမ်းဖမ်းဆုပ်ပြီး ခေါင်းကိုလည်း သူ့ရဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားမှာ ကပ်ဖိထားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကားပေါ်မလုပ်ခဲ့ရတဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်လေးကို အပီအပြင် လျှာအစွမ်းတွေ ပြနေတုန်းပဲ။ သူ့ရဲ့စောက်စေ့ပြားပြားကလေးကို ဆွဲစုပ်ပေးလိုက် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်း တစ်လျှောက်ကို အောက်ကနေအပေါ်ကို ထောင်လိုက် ယက်ယက်ပေးလိုက် စောက်ခေါင်းလေးထဲ လျှာသွင်းမွှေနှောက်ပြီး အတွင်းသားအဖုအထစ်တွေကို ဝက်အူလှည့်သလိုပဲ လှည့်ပတ်ပြီးမွှေ့ထိုး သိမ်းကျုံးဝေ့ဝိုက်ပြီး ယက်ပစ်လိုက်တယ်။ သူလည်း ရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူသွားလောက်တယ်။ သူ့စောက်စေ့ပြားပြားလေးကို စုပ်ဆွဲယက်ဆွပေး နေတာကနေ စောက်ပတ်အခေါင်းပေါက်ထဲကို လက်ညိုးနဲ့လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူးထိုးပြီး အဆက်မပြတ်ထိုးနှိုက်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့ သူ့စောက်ခေါင်းထဲကနေ စောက်ရည်တွေ တားမနိုင်ဆီးမရဆိုသလိုပဲ အပြင်ဖက်ကိုပါ လျှံပြီး ယိုစီးကျလာတယ်။ သူလည်းခံချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ “အ အ တော် တော် ပြီ အာကာ ဟင်း ဟင်း မင်းလီးနဲ့သာ မြန်မြန်လိုးလိုက်ပါတော့ကွာ … အစ်မ မဟန်နိုင်တော့ဘူး … ကွာ … ရ … ရပြီ ဆက်မလုပ်ပါနဲ့တော့ … နော် နော် အာကာ “ ” ကြိုက်လား မ… ကျွန်တော်လိုးပေးရတော့မလား “ ” လိုးလိုက်စမ်းပါ အာကာရယ်… မရဲ့စောက်ပတ်က … အရည်တောင်ရွှဲနေပြီကွာ “ သူလည်းပြောပြီးရော ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ပေါင်ကြားမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ လီးကို လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ပေါင်သားအိအိနှစ်ဖက်ရဲ့ အတွင်းထဲက စောက်ပတ်အဝမှာတေ့လိုက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း လိုးလိုက်တယ်။ ” ဇွိ အင့် “ လီးဒစ် ဝင်သွားတာနဲ့သူရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်ကိုထမ်းတင် ကိုယ်ကို ကိုင်းလိုက်တော့ သူရဲ့ဖင်လေး ကြွလာပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်း မိုးပေါ် ထောင်သွားတယ်။ ” အင့် ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် ဒုတ် ဒုတ် အင့် “ အရည်တွေနဲ့ ရွှဲဆိုနေတဲ့ မဝါစောက်ပတ်ထဲကို ကျွန်တော့်လီးကြီးက သူ့ရဲ့သားအိမ်ကို အရှိန်ဖြင့် ဝင်ဆောင့်တော့ သူတော်တော် ဖီးကောင်းသွားပုံရတယ်။ ” အင့်အင့်အင့်အင့် ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် အူးဟူးး ဟူးးး ” ” အား အင်း ဟင်းးးး … အာကာရယ် ဖြေး ဖြေး … အ အင့် အိအိ … အား ဆောင့် …ဆောင့် ဆောင့် ကောင်း ကောင်းတယ် … ထိတယ် အ … အရမ်းပဲ အိ အင့် ဟင့် “ ကျွန်တော် ပထမအချီမှာ လှေကြီးထိုးရိုးရိုး သေနတ်ပခုံးထမ်း နဲ့ပဲ အစဖွင့်လိုက်တာ ကလေးတစ်ယောက်အမေ စောက်ပတ်သာပြောတာ စေးနေတာပဲ။ စေးဆိုသူ့ယောကျာင်္းသေတာတောင် ခုနှစ်နှစ်ကျော်ပြီတဲ့ မသေခင်ကလည်း ကောင်းကောင်းလဲ မလိုးနိုင် ပြီးတော့ သူ့ယောကျာင်္း လီးကလဲ ငါးလက်မလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ ခြောက်လက်မကျော် ခုနှစ်လက်မလောက်ရှိတဲ့ ကျွန်တော့်လီးအတွက်ကျ သိပ်ကောင်းတဲ့ စောက်ပတ်ပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ စောက်ပတ်အတွင်းထဲက စုပ်ယူအားကလည်း အားကောင်းချက်ဗျာ။ စုပ်ယူအားကောင်းဆို မျှော့စောက်ပတ်နဲ့ သွားတွေ့တာကိုး တစ်ခါတစ်လေမှ လိုးခွင့်ရမယ့် မျှော့စောက်ပတ်ကိုလည်း အားရပါးရပဲ လိုးနေမိတယ်။
“ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် “အအအအ” ဗျိဗျိဗျစ်ဗျစ် “အအအအ ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် အင့်အင့်အင့်အင့် အားးးးး ရှီးးးးးးးး “ ” အ အ အာ အာကာ မြန် မြန်မြန်လိုးပေးပါလားးး အာ့အာ့အားးး အင်းးးး “ အချက်သုံးဆယ်လောက် လိုးပြီးသွားတော့ သူ့စောက်ပတ်ထဲက ပူနွေးနွေး အထိအတွေ့ကို လီးက ခံစားလိုက်ရတော့ သူပြီးသွားဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ သူပြီးပေမယ့် ကိုယ်ကမပြီးသေးဘူး။ ခါးကလည်း နည်းနည်းညောင်းလာတာရော ပခုံးကလည်း နာလာတာကြောင့် ” မ ပုံစံပြောင်းရအောင် “ ” ဟင်းးးး အင်းးးး မ ဘယ်လိုနေပေးရမှာလည်း ပြောလေ “ ” ရတယ် မ ဒီအတိုင်းလေးပဲ ပတ်လက်နေပြီး ဒူနှစ်ချောင်းထောင်ထားလိုက်တော့ “ ဆိုပြီးပြောလည်းပြော သူ့ခြေထောက်ကို ပခုံးပေါ်ကနေချပြီး ဒူးထောင်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးမှ သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကို ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး နည်းနည်းမြှောက်လိုက်တော့ စောက်ပတ်က အနောက်ကို စူထွက်လာတယ်။ အဲ့တော့မှ လီးကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး အနောက်ဘက်ကို ဖောင်းဖောင်းလေး ပြူးထွက်လာတဲ့ စောက်ပတ်အဝကို တေ့ပြီး အသာအယာပဲ ပြန်သွင်းထည့်လိုက်ပြီး ခပ်မြန်မြန် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်တယ်။ “စွတ် ဗြိ ဗြစ် … ဖျစ် ပြွတ်… ဘုတ် ဗြွတ် … ဗလွတ် စွိ ဖွပ် … ဗွပ် ဘုတ် ဇွိ ဇွပ် … ဘုတ် ဖွတ်… ဘွတ် ဇွပ် … ဗွပ် ဘုတ် …ဖတ် ဇွပ် ဗြိ ပြွတ် … ဘွပ် ဖွတ် ဘွတ် ဗလပ် လပ် ဗွပ် … “ “အင့် အိ အိယာ့ ဟိ အိ အင့် အင့် ဟင်း “ ဘယ်လိုပုံစံပဲလိုးလိုး မျှော့စောက်ပတ်ရဲ့ စုပ်ယူအားကတော့ အားကောင်းဆဲပဲဗျာ။ ပြီးတော့ လိုးချင်တဲ့စိတ်ထန်တာရော မျှော့စောက်ပတ်ရဲ့ စုပ်ယူအားကြောင့် ခဏလေးပြီးချင်လာတာနဲ့ မြန်မြန်ဆောင့်လိုးပေးလိုက်တယ်။
အချက်နှစ်ဆယ်လောက် အရောက်မှာပဲ.. ” အင့် “” ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် “အားးးးးး အီးဟီးဟီးးးး” ဗျွတ်ဗျွတ်ဗျစ်ဗျစ် “အူးးးဟူးးဟူးးး” ဇွိဇွိ ဗျစ်ဗျစ် “အီးဟီးဟီးးးးး မြန် မြန်မြန် လိုး လိုးပါ အ့ အ့အာ “ သူနောက်တစ်ချီပြီးတော့မယ်ဆိုတာ သိသာတယ်။ ပြီးခါနီးလေ မျှော့စောက်ပတ်ကလည်း ပိုပြီးစုပ်ယူအားကောင်းပြီး ပွစိပွစိဖြစ်ကာ စောက်ရည်တွေ ညှစ်ထွက်လာပြီး နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူ ပြီးသွားပြီး ကျွန်တော်လည်း မောမောနဲ့ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာမှောက်ရက် ခဏအနားယူပြီး သူ့ကိုတင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်တယ်။ အမောပြေလောက်မှ နှစ်ယောက်သား ရေချိုးခန်းဝင်ပြီး အပေါ့သွား ရေဆေးပြီး ခဏအနားယူနေကျတယ်။ ” မ အမောပြေ coffee သောက်မှာလား ကျွန်တော်ဖျော်ပေးမယ်လေ “ ” မောင် ဖျော်ပေးရင် သောက်မယ်လေ “ ” ဘယ်လိုခေါ်လိုက် ‘ မ ‘ ပြန်ခေါ်ပါအုံး “ ” ဒီအခြေနေထိရောက်ပြီးမှတော့ မောင် လို့ ခေါ်တာပေါ့ “ ကျွန်တော်ကျေနပ်စွားပြုံးလိုက်ပြီး ပါလာတဲ့ ဓါတ်ဗူးထဲက ရေနွေးနဲ့ coffee နှစ်ထုပ်ကိုဖောက်ပြီး ခွက်ထဲထည့်ပြီးဖျော်လိုက်တယ်။ သူနဲ့လည်း စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ေ့ပြာလိုက် နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလိုက် ပါးလေးနမ်းလိုက်နဲ့ အဆင်ကိုပြေလို့ coffee သောက်ပြီးသွားတော့ နှစ်ယောက်သား ကုတင်တစ်ချပ်တည်းမှာ စောင်လေးတစ်ထည်တည်းနဲ့ အတူတူမှေးနေရင်း သူက လီးကို လာဆွတယ်။ သူဆွတော့ ငနဲကလည်း ဘယ်နေမလဲ တောင်လာပြီလေ။ သူက အတူယှဉ်အိပ်နေရာကနေ အောက်ကိုလျောသွားပြီး စောင်ထဲခေါင်းဝင်သွားပြီး ကျွန်တော့်ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူ့လက်နဲ့ လီးကိုကိုင် ကျွန်တော့်ပေါ်ကိုတက်ခွလိုက်ပြီး ကိုင်ထားတဲ့လီးကို သူ့စောက်ပတ်အဝမှာ တေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုင်ချလိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်လီးကလည်း အစွမ်းကုန်တောင်မတ်ပြီး အပေါ်ထောင်နေသလို ရှိတာမို့ သူ့ဖင်သားအိအိနှစ်ဖက်က ကျွန်တော့်လီး အပေါ်ကနေ တည့်တည့်မတ်မတ်တေ့ချိန်၍ ဆောင့်ထိုင်ချလိုက်တော့ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲကို လျှောကနဲ ထိုးစိုက်သွားခဲ့ပြီး … “ ပြွတ်…..ဗြစ်…ပလွတ်…ပြွတ်….ဗြစ်…” ” အား ကောင်းလိုက်တာ … မောင်ရယ် “ ဆိုပြီး … သူအဆက်မပြတ် ကျုံးပြီး ဖိကာဖိကာနဲ့ ဖင်ကိုတလိမ့်လိမ့်နေအောင် ဆောင့်ထိုင်ချနေပေးတယ်။ လီးကလည်း စွိကနဲ ဇွပ်ကနဲ စောက်ရည်တွေလည်း လျှံပြီး စီးကျလာရကာနေ အဝင်ချောလှတာမို့ သူဆောင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ လိုးဆောင့်ချရင်း အတန်ငယ်ကြာတော့ နည်းနည်းမောလာတယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ကို မှောက်အိပ်ချလိုက်ပြီး အမောဖြေနေတုန်း ကျွန်တော်ကလည်း သူ့နို့တွေကို အောက်ကနေ ဆွဲပြီး စို့ပေးနေလိုက်တယ်။ သူအမောပြေမှ ဖင်ကို ဖြေးဖြေးချင်းလှုပ် ဆောင့်ပေးနေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ခပ်ဖြေးဖြေး အထက်အောက် ဖိချလိုက် မြှောက်တင်လိုက်နဲ့ ဆောင့်ပေးနေတော့ ကျွန်တော့်အဖို့မှာတော့ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ကာမအရသာကို အစွမ်းကုန် ခံစားနေရတာပေါ့။ သူ့ရဲ့စောက်ခေါင်းလေးကလည်း ဆွဲငင်ဓါတ် တစ်မျိုး ရှိနေသေးတယ် တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ သူ့ရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကနေပြီး လီးကို ရစ်ပတ်ဆွဲပြီး စုပ်ယူသလိုကို ခံစားရတော့ အထိအတွေ့က တကယ်ကို အရသာရှိလှတာပေါ့။ “ မောင် … ကောင်းရဲ့လား …” သူကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြီးမေးတော့ “ ကောင်းတာပေါ့ … မ အာ့ မရယ် သိပ်ကောင်းတာပဲ…” ပြောလည်းပြော လက်ကလည်း သူ့ရဲ့ ဖင်အိအိလေးကို အရသာခံကာ ဆုတ်ညှစ်ပြီး ကိုင်နေသေးတယ်။ သူကလည်း အလိုက်တသိပဲ ခပ်ပြင်းပြင်း ဖိဖိပြီး ဆောင့်ပေးနေရာကနေ သူ့ရဲ့ မို့မောက်နေတဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို ဖိချပေးတော့ ဘယ်ရမလဲ အငမ်းမရ စို့တာပေါ့။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက မာတောင်နေပြီး သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကလည်း တဟင်းဟင်း ဖြစ်လာပြီးတော့ သူ့ဖင်တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ဆောင့်ဆောင့်ပေးတယ်။
လီးကိုလည်း အရင်းထိမြုပ်အောင် သူ့ရဲ့ဆီးခုံနဲ့ ဖိကပ်ထားပြီး ပါချင်းကပ်လို့ လာပြီးအမောဖြေနေတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ စောက်ခေါင်းအတွင်းကနေ ချွဲကျိနေတဲ့ စောက်ရည်တွေက စိမ့်ထွက်လာပြီး ကျွန်တော့် ဆီးခုံပေါ်ကို စီးကျလာပြီး ပေါင်တွေပေါ်မှာရော ရွဲကုန်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့မောပန်းပြီး သက်ပြင်းချသံလေးတွေက ဟင်းကနဲ ထွက်လာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ သူ့ကိုအပေါ်မှဆင်းစေပြီး ပက်လက်လန် အိပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ပြီးမှ သူ့ဒူးခေါင်းနှစ်ဖက်ကြား နေရာပြန်ယူပြီး လက်က စောက်ပတ်နခမ်းသားလေးကိုဖြဲပြီး ကျန်တစ်လက်က လီးက်ိုကိုင်ကာ စောက်ပတ်ဝမှာတေ့ပြီး အချိန်သိပ်မဖြုန်းတော့ပဲ ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ သူ့အဖုတ်က စောက်ရည်ကြည်တို့ကလည်း စိမ့်ထွက်နေပြီမို့ ကျွန်တော့်လီးက တချက်ထဲနဲ့ပဲ အဆုံးထိအောင် တန်းဝင်သွားတယ်။ သူ့ပါးစပ်ကနေလည်း အိကနဲအသံလေးသာ ထွက်လာပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ကျောပြင်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်တွယ်ထားတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း လီးချောင်းနဲ့ သူ့အဖုတ်အတွင်းသား နုနုလေးတွေရဲ့ ပွတ်တိုက်တိုးဝင် ထိတွေ့တာကို အရသာခံရင်း ဇိမ်ဆွဲပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း စောင့်လိုးနေရာကနေ သူအောက်ကနေ ကော့ကော့ပေး လာတာနဲ့ သူ့လက်သည်းတွေက ကျွန်တော့်ကျောပြင်ကို အားမလိုအားမရ ကုတ်ခြစ်လာတာကြောင့် ဆောင့်တဲ့အရှိန်ကို မြင့်တင်လိုက်တော့ ရင်ထဲမှာရော ခေါင်းထဲမှာရော လီးကနေရော သူ့အဖုတ်ကနေ စုပ်ယူမှုတွေရော ခံစားချက်တွေက ရောပြီး စိတ်လှုပ်ရှားပြင်းထန်နေလို့ စောင့်လိုးချက် နှစ်ဆယ်လောက်မှာပဲ လီးကနေ ဖောင်းကြွတင်းလာပြီး လီးထပ်ကနေ လရည်တွေကို ညှစ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
သူလည်း နောက်မကျပါဘူး။ ကျွန်တော်နဲ့ပြိုင်တူနီးပါး ပြီးသွားခဲ့လို့ တယောက်ကိုတယောက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ရင်းနဲ့ ဒုတိယတစ်ချီ ပြီးဆုံးပြီး ငြိမ်သက်နေလိုက်တော့တယ် ။ ခဏနားပြီး အမောပြေမှသူ့ပေါ်ကနေဆင်းပြီး ကိုယ်တုံးလုံးပဲ ရေချိုးခန်းထဲသွားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ် ရေဆေးနေတုန်း သူပါရောက်လာတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကိုလည်း သန့်ရှင်အောင် ရေဆေးပေးလိုက်တယ်။ ရေဆေးပြီးတော့ အဝတ်အစား ပြန်ဝတ်လိုက်တယ်။ ခဏနားပြီး နှစ်ယောက်အတူ ဗိုက်ထဲမှာ စာသလိုရှိတာနဲ့ ထမင်းစားလိုက်ကြတယ်။ စားသောက်ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက် ထပ်ဖျော်ပြီး သောက်ကြတယ်။ သောက်ပြီးသွားတော့မှ တတိယအချီအတွက် ပြင်ဆင်ရင်း သူ့ရဲ့ကုတင်ပေါ်မှာပဲစောင်ကလေး တစ်ထည်ကို နှစ်ယောက်ခြုံပြီး ကျွန်တော့်လက်မောင်းပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကို တင်ပြီး သူကမှေးနေတယ်။ သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော့်ဘက် ဆွဲလှည့်လိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်လုံးလေးကိုပါ ဘေးတစ်စောင်း ဆွဲလှည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘေးတစ်စောင်းလေးနေပြီး သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းလေးကို စတင်ပြီး နမ်းလိုက်တယ်။ အဲ့လို နုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းရင် သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကပဲ သူက ကိုယ့်ကိုရှေ့ကနေပြီး ဦးဆောင်သွားတယ်။ နမ်းနေရင်းနဲ့ သူကခန္ဓာကိုယ်ကို အောက်ရှောလိုက်ပြီး သူ့ခေါင်းကို စောင်အောက်ဝင်ပြီး ကျွန်တော့် ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး လီးကိုကိုင်ကာ ကားပေါ်က အတိုင်းပဲ သူ့ရဲ့ပါးစပ်နဲ့ စတင်ငုံလိုက်တော့ အာငွေ့နွေးနွေးလေးက လီးကနေတဆင့် အကြောတွေကို ရောက်ရှိလာပြီး စိမ့်ကနဲ့နေအောင် ခံစားလိုက်ရတယ်ဒစ်ကလေးကို ငုံပြီး ဖွဖွလေးကိုက်လိုက်တော့။
” အားးးးး … ရှီးးးးး မ မ အာ့ မောင် မောင်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ကွာ “ သူ့ရဲ့ပုလွေအစွမ်းကို ဆယ်မိနစ်လောက်ခံစားပြီးမှ ” မ … မောင့်ကို လေးဖက်ကုန်းပေးပါ့လား မောင်နောက်ကနေ မ ရဲ့ဖင်လေးကို ကြည့်ပြီး လိုးချင်တယ် “ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ သူထလာပြီး ဖင်ကုန်းပေးတယ်။ သူဖင်ကုန်းလိုက်တော့ သူ့စောက်ဖုတ်လေးက နောက်ကိုထွက်လာပြီး အရည်ကြည်လေးတွေ ရွှဲနေတာရော နဂိုအသားညိုတဲ့ သူဆိုတော့ စောက်ဖုတ်လေးက ရဲရဲပြဲပြဲလေးဗျာ။ ဒါနဲ့ သူဖင်နဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို ကြည့်ပြီး မနေနိုင်တာနဲ့ ပါးစပ်နဲ့ ကုန်းစုပ်ပေးလိုက်တော့…. ” အားးးရှီးးးးး မောင် မောင်ကလည်းကွာ အနေရခက်အောင် တအားလုပ်တာပဲ မောင့်လီးကြီးသာ မရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးပြီး မြန်မြန်လိုးလိုက်ပါတော့ကွာ “ သူပြောမှပဲ သူ့ရဲ့ဖင်နောက်မှာ ဒူးထောက်နေရာယူလိုက်ပြီး လီးကိုကိုင်ကာ သူစောက်ဖုတ်နခမ်းသားလေးကို ဖြဲပြီး လီးကိုတေ့ပြီး တစ်ဆုံးထိုးပစ်လိုက်တော့ သူ့စောက်ဖုတ်က အရည်ရွှမ်းနေတော့သူ့ရဲ့ သားအိမ်ထိကို သွားထောက်မိတယ်။ ” ဗျစ် … ဗြီးးးးးး ဒုတ် “ ဗြွတ် ဒုတ် “ ကျွန်တော်ကလည်း အဆက်မပျက် ဆောင့်လိုးနေတော့ မဝါတစ်ယောက်.. ဘာလုပ်လို့ကိုင်ရမှန်း မသိတော့ပဲ အံကိုကြိတ်ပြီး မျက်လုံးလေးမှေးစင်းကာ ခေါင်းအုံးကို လက်နဲ့ ဆွဲစုပ်ကိုင်လိုက် နောက်တော့ လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ရဲ့ တင်ပါးကို အတင်းဆွဲဖက်ပြီး လက်သဲနဲ့လည်း ကုတ်ဆွဲထားတယ်။ အဲ့ဒီလို လက်သဲနဲ့ကုတ်လိုက်တော့ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲက ကျွန်တော့်ရဲ့လီးက ပိုပြီးတောင်လာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အသက်ကို ဝအောင် တစ်ချက်ရှုလိုက်ပြီး အားထည့်ပြီး ဆောင့်တော့တာပဲ။ ကျွန်တော်ရဲ့ လိုးဆောင့်ချက်များကြောင့် မဝါတစ်ယောက် မျက်လုံးများမှေးစင်းနေပြီး နှုတ်ခမ်းများကိုလည်း ကိုက်ခဲထားလို့ပေါ့။ မောင်အာ့ အားရှိသလောက် မြန် မြန်မြန်လေး အား အား ဆောင့် အားးးးး “ ပြီးချင်နေတာ ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။ သူရဲ့ ဖင်တွေကို ကော့ကော့ထိုးပေးပြီး ကာမစိတ်က အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိကာ အငမ်းမရ ဖြစ်နေတော့….. ” အား အား အား အီး နာ နာ နာ ဆောင့် နာနာဆောင့် မ မကို မ မညှာနဲ အား အင်း ဟင်း အိုး အိုး အားးး အင့် အင့် “ ကောင်းလိုက်တာ အို့ အိုး အီး ပြီးးး ပြီးပြီ အ့ အာ့ အားးး အမလေး လေးးးးး “ သူလည်းပြီးသွားရော ကျွန်တော်လည်း ဆယ်ချက်လောက်ထပ်ဆောင့်ပြီး ပြီးသွားတော့တယ်….. ပြီးပါပြီ။